Mmiri mmiri na Europe dị njọ karịa ka a tụrụ anya ya | Netwọk Mgbasa Ozi
David melguizo | | Nkewa, Netwọk Mgbasa Ozi, Ihe
Mmetọ na Rhine
Iwu mmiri ahụ rịọrọ ka ndị otu so na European Union ebumnuche maka mmụba dị ukwuu na mma mmiri dị mma site na 2015. Nnyocha e mere na nso nso a nke Landau Institute of Environmental Sciences, Helmholtz Center for Environmental Research (UFZ) na ụfọdụ ndị ọkà mmụta sayensị French (Mahadum nke Lorraine na EDF) na Suizos (Switzerland Federal Institute) maka Science Science na Teknụzụ Switzerland - EAWAG), na-egosi na ebumnobi a abụghị nke a ga-enweta, ebe ọ bụ na mmiri na-egbu egbu na ahụ mmiri ka dị oke elu.
Nnyocha ahụ na-egosi, na nke mbụ ya na Europe, na ihe egwu gburugburu ebe obibi metụtara kemịkal na-egbu egbu dị elu karịa ka a tụrụ anya ya. Otu n'ime ihe ndị bụ isi bụ na na usoro ugbu a iji melite ogo mmiri a dịghị etinye mmetụta nke ihe ụfọdụ n’uche.
Osimiri dị ka Danube ma ọ bụ Rhine bụ ihe ndị dị ndụ na-adọrọ adọrọ nke na-enye ọrụ dịka ntụrụndụ, ịkụ azụ na mmiri ọ drinkingụ drinkingụ maka nde mmadụ. O di nwute na ihe ndi mmadu a na-ekpughe na ntinye nke kemikal site na mpaghara ndi mepere emepe, site na ugbo na ụlọ ọrụ. A mmanya nke ọgwụ ọjọọ emetụta algae na freshwater ụmụ anụmanụ na bụ a nwere ike ibute ụmụ mmadụ.
N'adịghị ka ihe a na-eche n'echiche ruo taa (ịhụnanya nke nsị kemịkal dị ezigbo na mpaghara ma dịpụrụ adịpụ), ọmụmụ ihe anyị na-ezo aka na-egosi na iburu n'uche nnukwu-ọnụ ọgụgụ data, ihe ize ndụ nke obibi site na kemịkal na-egbu egbu na-emetụta ọtụtụ puku usoro mmiri mmiri nke Europe. Mmiri ọgwụ ọjọọ na-anọchite anya iyi egwu gburugburu ebe obibi ma ọ dịkarịa ala ọkara nke mmiri mmiri na Europe, na ihe dịka 15% nke ikpe biota na sistemụ mmiri ọhụụ nwere ike ibute ọnwụ dị elu.
Ndị otu ndị nyocha lekwasịrị anya n'ịmụta oke oke ihe egwu dị iche iche maka bekee nke Rhine na Danube, wee tụọ ha maka otu atọ dị iche iche na-ahụkarị na mmiri ndị a, azụ, invertebrates na algae. Ihe omuma a, nke enwetara site na nlekota oru nke ndi oru n’aho ugbua, gosiputara na akuku nke ihe nlere di iche di iche nke ukwuu n’itinye mkpuchi nke mbara igwe na nke oge, nke n’eme ka uzo di iche n’etiti obodo di iche siri ike.
Dịka ọmụmaatụ, egosiri na ogo mmiri ka njọ na France, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'ihi na ndị ọchịchị nọ na mba a nwere netwọkụ njikwa zuru oke ma nyochaa ọnụ ọgụgụ dị ukwuu, gụnyere ecotoxicologically mkpa mmiri, n'ọtụtụ mmiri dị iche iche. ihe nlele. Na mba ndị ọzọ, ọtụtụ n'ime ihe egwu ndị a nwere ike ọgaghị ahụ ya n'ihi enweghị nghọta nke ule ma ọ bụ n'ihi na ndepụta nke ihe ndị a na-achịkwa ezughi oke. Nke a, n'ozuzu ya, na-eme ka ihe ize ndụ ndị sitere na nyocha ahụ bụrụ ihe a ga-eleda anya karịa karịa.
Isi ihe na-emetọ mmiri na gburugburu ebe obibi mmiri si ọrụ ugbo, obodo mepere emepe, na ụlọ ọgwụ na-ekpofu mmiri mmiri. Pesticides bụ ihe ndị a na-ahụkarị na-emetọ mmiri na sistemụ mmiri ọhụrụ, ọ bụ ezie na ogige organ-tin, ogige organo-brominated, na ndị enwetara site na combustion nke hydrocarbons, na-apụtakwa na ọkwa ịta ahụhụ dị egwu. Tụkwasị na nke a, a naghị etinye ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke mmiri ọgwụ eji eme ihe n'oge a mgbe ị na-enyocha ogo mmiri na maka ụfọdụ ihe, ikike ịta ahụhụ dị irè nwere ike ịdị elu.
Ndị ọkà mmụta sayensị na-esonye na ọmụmụ ihe a na-egosi na naanị otu ụzọ dị mkpa akụ na ụba ga-esi kpuchie akụkụ niile nke ihe ndị dị mkpa ga-abụ mmeghe nke usoro obibi na usoro ọgụgụ isi ha na usoro dabere na nzacha kemịkal. N'ụzọ dị otú a, enwere ike ịchọpụta ihe ndị dị egwu ọbụlagodi tupu etinye ha na ndepụta nsị. Ihe nlere ozo bu na odi nkpa ime ihe obula ma oburu na aghaghi ichikota nchebe nke ihe ndi ozo.
Ndị otu niile na-eme nchọpụta kwenyere na ọ bụrụ na enweghị mgbanwe mgbanwe n'ụzọ a na-aga n'ihu ugbu a, iru ọkwa nke Water Framework Directive chọrọ agaghị ekwe omume. Nzọụkwụ ndị a ga - agbaso ma ọ bụrụ na ịchọrọ belata ntinye ma kpochapụ ihe ndị na-egbu egbu site na usoro mmiri ga - abụ, mbenata ntinye nke onwu na oru ubi ma melite teknụzụ na ọgwụgwọ mmiri. Ọ bụrụ na etinyeghị usoro, ogologo oge, ha nwere ike ibute ụdị mmadụ dị egwu, na-emetụta usoro okike na ime ka ikike ịsacha onwe onye nke aquifers ghara ịdị.
Ozi ndi ozo: Europe ikwuwapụta atụmatụ iji gbochie mgbanwe ihu igwe, Ike ikuku. Greenhouses na ngwa ha na oru ugbo
Fuentes: Helmholtz Center maka Nnyocha Gburugburu Ebe Obibi (UFZ), PNAS
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Nkewa » Mmiri mmiri na Europe dị njọ karịa ka a tụrụ anya ya